च्याउ उर्मे जस्तो उर्मेका इन्टिच्यूटहरु यहाँ धेरै छन, जो केही समयपछि आफै हराएर जान्छन् : निम्स इन्टिच्यूट प्रवन्धक निर्देशक रामचन्द्र गौतम - Shiksha Sansar
काठमाडौँ । एक दशक भन्दा लामो समयदेखी विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै नेपालकै उत्कृष्ट इन्टिच्यूट बन्दै आइरहेको निम्स इन्टिच्यूटले आफ्ना विद्याथीहरुलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विद्याथीहरुलाई सफल बनाउन के गरिरहेको छ, आगामी योजनाहरु के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर निम्स इन्टिच्यूटका प्रवन्धक निर्देशक रामचन्द्र गौतमसँग शिक्षा संसारका संवाददाताले गरेको कुराकानीको साराशं
तपाईको यो इन्टिच्यूट कति सालमा स्थापना भएको हो र कुन कुन विषयको पढाई हुन्छ ?
हाम्रो यो इन्टिच्यूट २०६२ सालमा स्थापना भएको हो । हामीले स्थापना सालदेखी केही वर्ष एसएली दिइसकेपछिका प्रोग्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ ।
हामीले एस,एल,सी दिएका विद्याथीहरुलाई स्टाफ नर्स, एच ए, ल्याव, फार्मेसी, डेन्टल, ओर्भसेयर,साइन्सको व्रिजकोर्ष पढाउदै आएका थियौँ भने अहिले पछिल्लो समय लगभग २०६७ सालदेखी हामीले ब्याचलर तर्फ पनि सुरु गर्दै आएका छौँ, ब्याचलर तर्फ, एम.वि.वि एस, वि.डि.एस, वि.ए.एम.एस,वि.एस .सि नसिङ, फार्मेसी, विए .सी भेटनरी, वि.एम .एल टी, वि.पि.एस, लगाएतका धेरै कक्षाहरु हामीहरुले २०६७ साल देखी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र हाल सम्म यही विषयलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।
यहाँ धेरै विद्याथीहरु किन पढ्न आउछन् ?
सबै भन्दा ठुलोकुरा गुणस्तरीयता हो । अर्काे भनेको विद्यार्थीहरुको रुचाईको कुरा पनि हो । के हुन्छ भन्दा एसइइ अथवा प्लस टु पछिको जुन तीन देखी चार महिनाको विदाको समय हुन्छ ।
त्यही तीन चार महिनाको समयमा विद्याथीहरुले म नर्सिङ पढ्र्छु अथवा मेडिकल पढ्र्छु भन्ने विद्यार्थीको सोचाइ पहिलेदेखी नै हुन्छ । त्यसैले इन्ट्रान्समा कस्तो प्रश्न सोध्छ, र परिक्षामा कसरी नाम निकाल्न सकिन्छ भन्नेकुराहरु विद्याथीहरुमा पहिलेदेखी सोच राखेका हुन्छन त्यही सोच पुरा गर्न र केही सिक्नको लागी विद्याथीहरु यहाँ पढ्न आउँछन् ।
यहाँ अघिल्ला वर्षहरुमा पढेका विद्यार्थीले ल्याएको नतिजा हेर्ने हो भने हामीले राम्रो गरिरहेका र्छौँ त्यसैले पनि विद्याथीहरुले यहाँ राम्रो पढाई हुन्छ, यहाँ पढियो भने सफल भइन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर धेरै भन्दा धेरै विद्याथीहरु यहाँ पढ्न आएको पाइन्छ ।
अहिले सम्म जतिपनि विद्यार्थीहरु यहाँ पढ्छन् ति सबै विद्याथीहरु विषयगत हिसाबमा पढ्दै आएका छन् ।
त्यसैले सबै भन्दा पहिले विद्यार्थीहरुमा निखारता ल्याउनुपर्छ, विद्याथीहरुमा निखारता आइसकेपछि उनीहरुले चाहेको विषय पढ्न सक्छन् । यसरी विद्यार्थीहरुबाट रिजल्ट आउन थालेपछि यो आपसीआप वृद्धि भएर आउन थाल्छ ।
हामीसँग जेजे प्रोग्रामहरु छन् तिनीहरुलाई अझै छुट्टा छुट्टै कक्षाहरुमा संचालन गर्नेे, व्यस्थीत कक्षा कोठाहरु बनाउने र दक्ष शिक्षकहलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्यार्थीलाई अझै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो योजनाहरु छन् ।
विद्याथीहरुलाई कसरी पढाई रहनु भएको छ ।
अहिले सम्म साधारण बोर्ड मार्करले नै पढाउने हो किन भने ठाँउ सानो छ । ठाँउ सानो भइसकेपछि विद्यार्थीको पढाई कस्तो छ, कुन विषय पढ्न आएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।
अघि पनि मैले भने सबै विषयको छुट्टा छुट्टै कक्षा कोठाहरु हुने भनेको निम्स एक मात्र संस्था हो । त्यसैले हामीले प्रत्यक विषयको छुट्टा छुट्टै कक्षा कोठाहरुलाई अझै ब्यवस्थित बनाएर लैजाने हाम्रो आगामी योजनाहरु रहेका छन् ।
अबैधानिक रुपमा सञ्चालनमा भएका इन्टिच्यूटहरुले तपाइहरुलाई कस्तो असर पारिरहेका छन् ?
यो कुराको छानविन गर्ने विभिन्न निकायहरु छन् । यस्ता संस्थाहरु दर्ता नभएर संस्था चलाउनुहुदैन भन्ने कुरा हो ।
तर कस्तो छ भने च्याउ उर्मे जस्तो उर्मेका इन्टिच्यूटहरु यहाँ धेरै छन् । त्यस्ता संस्थाहरु केही समयको लागी आउछन् छोटो समयमा नै हराउँछन् । छोटो समयको लागी भर्ना लिन्छन् मनोमानी तरिकाले शुल्क उठाँएको पनि पाइन्छ । तीनीहरुलाई गुणस्तरीयता भन्नेकुरा थाहा छैन् ।
यो वर्ष पढाएको इन्टिच्यूट अर्को वर्ष नहुन पनि सक्छन् । त्यस्ता संस्थाहरु धेरै छन् त्यसलाई सम्बन्धित निकायहरुबाट नै अबैधानिक रुपमा संञ्चालन भएका ती संस्थाहरुलाई छानविन गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ
तपाईहरुलाई असर चाही के परी रहेको छ ?
हामीलाई असर कस्तो पारि रहेको छ भने बाहिरबाट आएका विद्याथीहरु आफ्नो तीन चार महिना बिदाको समयमा केही सिकिन्छ भोलीका दिनहरमा जागिर खान तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागी नाम निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आएका विद्यार्थीहरुलाई फि को कुराहरु देखाएर, सामान्य शुल्क राखेर विद्याथीहरुलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर भर्ना लिने र कोर्ष पुरा नपढाएर विचमै विद्याथीहरुलाई कोर्ष सक्यिो भन्ने परीपाटी धेरै छ । यसले गर्दा हामी बैधानीक रुपमा संचालनमा आएका संस्थाहरुलाई असर त परिरहेको छ ।
यहाँ पढ्न आएका विद्यार्थीहरुबाट कस्तो प्रतिकृया पाइरहनु भएको छ ?
अहिले सम्म यहाँ पढ्न आएका विद्यार्थीको सफलताको विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने निकै राम्रो छ । नाम निकाल्न नसकेका कतिपय विद्याथीहरुले नै के भन्छन भने यति राम्रो संस्था, शिक्षकले पढाउदाँ पढाउँदै हामीले नाम निकाल्न नसक्नु गल्ती हाम्रै हो संस्थाले हाम्रो लागी गर्ने यो भन्दा कुनै ठाँउ छैन् भन्ने गरेको कुराहरु पाइन्छ । सबै विद्याथीहरुबाट सकरात्मक प्रतिकृया पाउने गरेका छौँ । यस संस्थामा अहिले कति विद्याथीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
लगभग बाह्र तेह्र सय विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् र केही समय अघि मात्र कक्षा १२ को परिक्षा सक्यिो र आज भोली भर्ना गर्ने क्रम जारी नै छ जहाँ सम्म लाग्छ हामीले १५ सय विद्यार्थीको भर्ना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ र त्यो लक्ष्य पुरा हुनेमा म विश्वस्त छु । सरकारको तर्फबाट तपाईहरको अपेक्षा के छ ।
सरकारले अबैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका त्यस्ता इन्टिच्यूटलाई कारबाही गरी वैधानिक रुपमा संचालन भइरहेका संस्थाहरुलाई व्यबस्थित पारिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
किन निम्समा नै पढ्न आउने, के छ त्यस्ता विशेषता ?
किन यहाँ पढ्न आउनु पर्छ भने निम्स एउटा शिक्षकहरुले खोलेको संस्था हो । भ्यालीमा नाम चलेका शिक्षकहरुको समुह तपाइले यहाँ पाउन सक्नु हुन्छ । त्यो समुह पाइसकेपछि विद्यार्थीले जुन उद्देश्य लिएर आएको छ त्यो यहाँ पुरा हुन्छ र अर्काे कुरा के छ भने यहाँ जतिपनि कक्षाहरु हुन्छन् ती सबैको लिमीट साइज हुन्छ ।
कक्षामा विद्यार्थीको संख्या पनि लिमिट नै हुन्छ । विद्याथी जुन विषय पढ्ने भनेर आएको छ त्यसको छुट्टै कक्षा पनि यहाँ गराइन्छ । त्यसैले अन्य इन्टिच्यूट भन्दा हामी अलि फरक छौ । जसकारणले अरु इन्टिच्यूट भन्दा निम्स धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा पर्नुको कारण यही होला जस्तो लाग्छ मलाई ।
अन्त्यमा, यहाँ पढ्न आउने विद्याथीहरुलाई र पढाउन ल्याउने अभिभावकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
केही नभएको दिमागमा सैतानको बास भने झै, एइइ अथवा प्लस टु दिइसकेपछि । जुन बिचमा विदाको समय हुन्छ ।
त्यो विदाको समयलाई राम्रो तरिकाले सदुपयोग गनुहोस भन्ने सल्लाह दिन्छु ।
यो विचामा विद्यार्थीले पढेपछि धेरै कुराहरु सिक्छन् भोलीका दिनहरुमा आउने परिक्षाका प्रश्नहरुसँग नजिक हुन पाउँछन् जसकारण उनीहरुलाई आगामी दिनहरुमा सजिलो हुन्छ ।
सकेसम्म बालबालिकाहरुको समयलाई खेर नफाल्दिनुहोस् । जसले गर्दा बच्चाहरुको पढ्ने बानीको विकास हुनुको साथै बालबालीका कुलतमा लाग्नबाट पनि बच्छन् ।